Teboka fivavahana amin'ny akanjo ratsy | TOKO VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Teboka vavaka hanoherana ny fitafiana ratsy
Teboka vavaka hanoherana ny fitafiana ratsy
Androany isika dia hanao teboka vavaka hanoherana ny akanjo ratsy. Akanjo tsara tarehy ny akanjo. Amin'ny lafiny lehibe, ny karazan'akanjo hitanao amin'ny olona iray dia azo ambara mialoha hoe manan-karena na mahantra izaitsizy izy. Andao haka sary avy amin'ny fiainan'i Josefa. Voarakitra ao amin'ny soratra masina fa ny fitafian'i Josefa dia vita amin'ny loko tsara tarehy maro, izay nahatonga ny mpiray tampo aminy saro-piaro.
Tahaka ny akanjo ny akanjo ho fanabeazana ny vatana, dia fitaovana ara-panahy koa ahafantarana azy izany. Matetika ny fahavalo dia mametraka akanjo ratsy amin'ny rembiny hahafahany mamantatra azy ireo. Ary vantany vao napetraka tamina akanjo ratsy ny lehilahy iray, dia nanjary mora tohanan'ny fahavalo izy satria raha vao hitan'ilay fahavalo ilay akanjo, dia fantany fa azy io. Alohan'ny hitrangan'ny fahagagana amin'ny fiainan'ny lehilahy dia tsy maintsy misy fiovana akanjo. Na tsara na ratsy ny fihodinana dia tsy maintsy misy fiovana akanjo.
Rehefa natao praiminisitra tany Egypt i Josefa dia niova ny fitafiany. Josefa dia nitafy ny fitafiana tany am-ponja, saingy rehefa nisandratra izy dia nanomboka nanao ny fitafian'ny mpanjaka. Toy izany koa i Bartimeo jamba, tsy maintsy nanala ny akanjony izy mba hahafahan'ny tanan'Andriamanitra mahery mampiverina ny masony. Marka 10: 50-52 Ary nariany ny lambany, dia nitsangana izy ka nanatona an'i Jesosy.
Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Inona no tianao hataoko aminao? Hoy ilay jamba taminy: Tompoko, mba hahiratra aho.
Ary hoy Jesosy taminy: Mandehana; ny finoanao no nahasitrana anao. Ary nahiratra niaraka tamin'izay izy, dia nanaraka an'i Jesosy teny an-dalana.
Rehefa miravaka akanjo ratsy ny lehilahy, dia ho lasa rembin'ny devoly ny olona toy izany. Mandidy araka ny herin'ny lanitra aho fa ny fitafiana ratsy rehetra izay nitafy anao dia simba amin'ny anaran'i Jesosy.
Ry Jesosy Tompo ô, mankalaza anao aho satria Ianao no Andriamanitra mihoatra ny fiainako. Misaotra anao aho noho ny fahasoavanao. Misaotra anao aho noho ny fahatokianao. Avelao hisandratra amin'ny anaran'i Jesosy ny anaranao.
Tompoko, tonga amin'ny fanoherana ny fahefana sy ny fanapahana rehetra izay mikarakara akanjo ratsy ho ahy aho, avelao ny hery toy izany ho ringana amin'ny anaran'i Jesosy.
Tonga hamely ny lehilahy sy vehivavy matanjaka rehetra manomana ny akanjo ratsy ho ahy aho, latsaka amin'ny fahafatesana amin'ny anaran'i Jesosy.
Andriamanitra Andriamanitra ô, manangana alitara afo hamelezana ny hery razana rehetra aho izay namorona fitafiana tsy fahombiazana hapetaka amiko, avelao ny afon'ny Fanahy Masina handrava ny hery toy izany.
Tompoko, ny akanjo ratsy rehetra namboarina ho ahy, dia may amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny enta-mavesatry ny demonia ataon'ny fahavalo mba hampahamenatra ahy, miverina amin'ny mpandefa amin'ny anaran'i Jesosy.
Andriamanitra Andriamanitra ô, miantso ny afon'ny fanahy masina amin'ny hery rehetra nanapa-kevitra ny hametraka akanjo mitafy henatra sy latsa ho ahy aho, aringako amin'ny anaran'i Jesosy.
Ray ô, mivavaka aho mba hanovanao ny fahafaham-baraka nataoko ary hataonao fitahiana amin'ny anaran'i Jesosy izany.
Ny demonia voninahitra rehetra izay nirahina handrava ny fitafiako feno voninahitra, dia nodorako tamin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, ny hery demonia rehetra manara-maso ahy hatrany amin'ny zava-bitako farany, mivavaka aho mba handrehitra afo amin'ny anaran'i Jesosy ianao.
Jesosy Tompo ô, mivavaka aho mba ampitafinao akanjo miloko maro aho, mivavaka aho mba hosatrohanao satro-boninahitra aho, manapa-kevitra ny handringana ny akanjo rehetra izay napetraka tamiko tamin'ny anaran'i Jesosy.
Ry Andriamanitra Andriamanitra ô, avelao ny anjelin'ny Tompo hanova ny akanjo ratsy rehetra amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny fitafiam-paharariana rehetra, avelao ny afon'Andriamanitra hamiravira azy ireo amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny fitafiana misy aretina tsy sitrana, aringako amin'ny afo amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Fa nomena anarana mihoatra ny anarana hafa isika, fa amin'ny fiantsoana ny anarana Jesosy, dia tsy maintsy miondrika ny lohalika rehetra ary samy mila manaiky fa Andriamanitra Izy. Izaho dia miady amin'ny fitafiana demonia amin'ny aretina amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.
Raiko ô, avy hamely ny fitafiana ozona rehetra aho, izay mitsangana hamely ahy amin'ny fitsarana ratsy, ary manimba ny akanjo toy izany amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Fa voasoratra hoe: Kristy dia efa voaozona hamonjy antsika, satria voaozona izay mihantona amin'ny hazo, ny ozona ratsy rehetra izay nametraka fitafiana mahamenatra ahy, ka may amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny fitafiana rehetra eo amiko izay misarika ny faharatsiana, ny henatra na ny fanaintainana, dia nodorako tamin'ny anaran'i Jesosy ianao. Ray Tompo ô, mivavaka aho mba hamonjy ahy amin'ny fijaliana ratsy rehetra amin'ny fiainako tonga vokatry ny fitafiana ratsy teo amin'ny fiainako tamin'ny anaran'i Jesosy.
Ry fitafian'ny fahantrana, mandoro afo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra efa nampanantena fa hitahy ahy amin'ny voninahitra sy ny voninahitra Izy, ary hanampy ny harena rehetra amin'ny fiainana, dia manoratra aho fa ny fahantrana dia horavana amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny fitafiana ratsy rehetra amin'ny tsy fitoviana, ny fitafiana misakana ahy tsy hanao zavatra tsara, ny akanjo manakana ahy tsy hanao zavatra tsara ataon'ny vadiko amin'ny fomba mety, dia manimba ny akanjo toy izany amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Fa Kristy efa nandoa ny trosako rehetra teo amin'ny hazo fijalian'i Kalvary. Izay akanjo ratsy rehetra manintona trosa eo amin'ny fiainako dia aringako amin'ny anaran'i Jesosy.
Nampanantena Andriamanitra fa hanome ahy fahafinaretana mandritra ny taona maro, ary tsy ho faty aho fa ho velona. Mandidy amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra aho, ny akanjo ratsy rehetra amin'ny fisintomako fotoana fohy, dia may amin'ny anaran'i Jesosy.
Previous lahatsoratraTeboka vavaka hanoherana ny fanafihana ratsy
Next lahatsoratraTeboka vavaka hanoherana ny sorona ratsy
Andinin-Baiboly 10 hivavahana rehefa mila fahombiazana ianao